> Ny Tambajotra Sosialy Ny Zava-dozan’i Almansa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2012 1:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Català
Ny 25 Aprily 2012, ny olona rehetra, tao amin'ny tambajotra sosialy sy teny an-dalambe, dia niresaka baolina kitra daholo : voahilika tamin'ny Ligue des Champions ny Barça. Ny olona rehetra hoe ? Ekena, ‘Valenciens’ vitsivitsy mpiondana aterineto no niresaka ihany koa ny tantara. Toy ny isan-taona, dia nahatsiaro ny namoizany an'ireo andrim-panjakana mahaleotena tao Valence tamin'ny 25 Avril 1707 ry zareo, mba hahafahany miaro ny fizakàn-tenany amin'izao fotoana. Tamin'ity taona ity, io fankalazana io dia tena natokana ho an'ny vahoaka, tsy nisy fankatoavana ofisialy na kely aza [amin'ny teny catalan] : ireo Corts Valencianes, fehezin'ny Antokom-Bahoaka, dia nisafidy ny hanome voninahitra ireo Valenciens nandray anjara tamin'ny Cortes de Cadix sy tamin'ny fanoratana ny Lalampanorenaa espaniola tamin'ny 1812. Ry zareo avy ao Valence, na lahy na vavy, izay maniry hankalaza ny 25 Aprily dia nanao izany imasom-bahoaka ny Sabotsy 28, nandritra ny fihetsiketsehana efa lasa fomban-drazana ankehitriny sy ireo kaonseritra karakarain'ny fikambanan'olon-tsotra Action Culturelle du Pays Valencien (ACPV) [amin'ny teny catalan]. Teo ampiandrasana dia nankalaza ilay hetsika ireo tambajotra sosialy.
Isaky ny 25 aprily, ny firenena Valencien dia mahatsiaro ny andro iray nanamarika ny zotram-piainany : ny faharesen'ireo andiany nentin'ny archiduc Charles d’Autriche niatrika ny tafik'i Philippe d’Anjou tamin'ny Fifandonana tao Almansa ny 25 aprily 1707, tafiditra tao anatin'ny Ady ho Fakàna indray an'i Espana. Ity Ady ho amin'ny Fakàna indray ity dia fifanolanana iraisam-pirenena naharitra ela, ka nandritra izany ireo tarika niraisan'ny frantsay sy ny espaniola dia niatrika ny tafika nitambatr'i Angletera, Portugal, ireo Faritany Mitambatra sy Aotrisy (mba tsy hitanisàna afa-tsy ireo mpifanandrina goavana) mba hakàna ny satroboninahitra espaniola. Ary angamba noho izany no antony rehefa manazava ity ampahany amin'ny tantara ity amin'ny fomba fijery ankapobeny, dia matetika no tsy dia raharahaina loatra ny fiantraikany mavesa-danja hoan'ny Firenena Valencien, ireo Nosy Baléares ary ny Principauté de Catalogne. Mba hahatsapàna izany dia tsotra fotsiny, ampitahaina ireo fitantarana samihafan'ny tantaran'ny Fifandonana tao Almansa ao amin'ny Wikipédia, ohatra hoe ny fitantaran'ny Anglisy ampitahaina amin'ny an'ny catalane.
Ny fandresena azon'ny tariky ny Duc de Berwick, nanome tombony an'i Philippe d'Anjou, nanoloana ny tafika mpomba ny Archiduc Charles d'Autriche, no nanamarika ny fanombohan'ny fanjanahana nataon'ny Bourbons ny Fanjakan'i Valence sy ny ambiny teo amin'ny firenena Catalans . Fotoana fohy taty aoriana, tamin'ny fampiharana ny Decrets de Nova Planta sy ny “por justo derecho de conquista” [« zo fotsiny izao noho ny fananiham-bohitra », amin'ny teny espaniola], ny fanjakan'ny “Couronne d'Aragon” dia niaina ny fanjavonan'ny fizakàn-tenany sy ny lalànan-dry zareo ary ireo andrim-panjakany izay nosoloina an'ireo avy any amin'ny “Couronne de Castille”.
Nanaraka ny faharesen'i Almansa ny maro hafa : ny 11 septambra 1714 (andro ankalazaina amin'ny fomba ofisialy ho Androm-Pirenena Ho An'i Catalogne) no lavo i Barcelone, ary ny 11 jolay 1715 i Majorque, Ibiza sy Formentera. Ny fandresen'i Philippe V dia nahafahany nipetraka ho ny mpanjaka voalohan'ny “dynastie des Bourbons” tany Espagne. Araka ny fomba fanao absolutisme (tsy refesi-mandidy) napetraka tany Frantsa, dia nanomboka fanavaozana goavana sy ifotony tamin'ny fitantànana i Philippe V mba hampivangongoany ny fahefana.
Vao azony antoka tsara ny fandreseny, dia nambaran'i Philippe V ny Decrets de Nova Planta, izay nanafoana ny zo sy ireo andrim-panjakana nahalalàna ireo fanjakan'ny “Couronne d’Aragon”. Ireo Fors de Valence, ny rafitra mpanao lalàna sy politika tao Valence efa nisy nandritra ny taonjato efatra dia narodana avokoa, tahaka ny nanafoanana ireo rantsana ara-politika sy ara-tsosilay, tahaka ny “Corts” na ny Généralité ( na ny Fitambaran'ireo andrim-panjakana rehetra tao Espagne, toy ny Filoha, ny Fitsarana, ny Governemanta…). Fomba fiteny malaza iray avy ao Valence no mampahatsiahy izany rehetra izany : « Raha avy ao Almansa ny loza no miainga, tratra daholo ny sisa rehetra ».
Ireo fisaintsainana, fitakiana sy fihetseham-pon'ny mpampiasa Twitter avy amin'ny firehana samihafa dia mitambatra eo ambanin'ny tenifototra #25dAbril sy #25Abril [25 aprily] [amin'ny teny catalan, raha tsy misy fanamarihana mifanohitra] :
@ferran_campos Mampianatra antsika hahatakatra ny anio ny tantara ary ho amin'izany no tokony hahatsiarovana azy. Hanoherana ny fanadinoana, ny tadidy sy ny tsiahy. #25dabril #1707 #PaísValencià [Firenena “Valencien”]
@fraferfa Arahaba! 305 taona lasa izay, ry mponina eto Valence, lahy sy vavy, no namoizantsika ny “fors” antsika, ary niaraka taminy koa ny fiandrianam-pirenentsika. Ndeha halaina indray ireny! #25Abril
@ForcaJoves#25dabril Aoka hirehareha amin'izay fototra niaviantsika isika, ny kolontsaintsika ary ny tantarantsika amin'ny maha-vahoaka antsika. ry Firenena Valencien. #ForçadelsJoves [Herin'ny Tanora]
@mirodavid Androany #25abril tsy maintsy tadidiantsika, terak'i Valence, fa an-dalam-pamoizana ny “Généralité” fanindroany indray isika izao.
@melderomerAV « Heveriko fa tsara ny hamotehana sy hanafoanana ny “fors” rehetra, ny tombontsoa manokana, ny fomba amam-panao ao anatin'ny fanjakan'ny Aragon sy Valence » [amin'ny teny espaniola] #25abril
@VicentFlor Mba fantatrao va re izay zavatra ambarako anao e? Hoe tsy hahavita na inona na inona hanoherana antsika ry zareo ! Na i Philippe V na i Juan Carlos Ier na ireo izay mbola ho avy ! #25Abril
@Feliuventura #25Abril 305 taona niaretana an'ireo mpihaza elefanta.
@trencalos Izay mety ho politika novolavolaintsika dia hiasa hanohitra antska ihany. #insubmissió [insoumission] #jonovullpagar [tsy te-handoa ny sandany aho] #Fuster #25dabril
Betsaka no hita tao amin'ny Facebook sy Twitter raha ny sary malazan'i Philippe V natsongoloka (mbola amin'izay endrika izay hatrany no anehoana an'ilay sary hosodoko ao amin'ny tranombakoka “Almodí de Xàtiva”, ho fahatsiarovana ny fahirano sy ny fahamaizan'ny tanàna tamin'ny 1707), tahaka ny naha-marobe ihany koa ny fanondroana ireo hira mampahatsiahy ilay vanin-tantara, fahiny na ankehitriny, toy ny Cant dels Maulets d’Al Tall na Viure d’Obrint Pas.
@jvdasi 25 d'abril « … , ny trondro anaty rano ary ireo tremalahy anaty lavaka. Ary raha tsy hiaro azy Ny Tompontsika, dia hotapahantsika ny rambon'ingahy Philippe de Bourbon » #25abril [teny notsongaina tao amin'ny Cant dels Maulets]
Amin'ity taona ity, ny fotoana ifanomezana [amin'ny teny catalan] mba hankalazana ny 25 Aprily eny an-dalamben'i Valence dia napetraka ho ny 28 Aprily amin'ny 6 ora hariva, Place Sant Agustí. Resahana ao amin'ny Twitter eo ambany tenifototra #25dAbrilDiallibertats [25 Aprily andron'ny fahafahana].